Mogadishu Journal » Van de Beek: Waqtigeygu waa hubaal inuu imanayo Man Utd
Van de Beek: Waqtigeygu waa hubaal inuu imanayo Man Utd
Donny van de Beek ayaa ka hadlay bilowgiisii ​​noloshiisa Manchester United ka dib barbarihii Netherlands iyo Spain ee Arbacadii.
Donny van de Beek ayaa sheegay in waqtigiisu "hubaashii inuu imanayo" Manchester United iyadoo gooldhaliyaha reer Netherlands uu wacdiyey sabir iyadoo daqiiqado uu maqan yahay.
Van de Beek ayaan weli bilaabin kulan Premier League ah oo uu u ciyaaro Man United tan iyo markii uu kaga soo biiray kooxda ka dhisan Eredivisie ee Ajax bilowgii xilli ciyaareedkaan heshiis gaaraya ilaa to 39.1million (€ 44m).
23 jirkaan ayaa kaliya arkay 75 daqiiqo oo uu ciyaaray Premier League, isagoo dhaliyay hal gool, halka uu labo jeer ku soo bilaabay Champions League iyo labo jeer EFL Cup xilli ciyaareedkan.
Markii la weydiiyay xaalada uu ku sugan yahay magaalada Manchester ka dib markii uu dhaliyay kulankii Netherlands ay barbaraha 1-1 la gashay Spain Arbacadii, Van de Beek ayaa u sheegay NOS: “Waxay ii muuqataa mid cakiran haddii aan sidan dhaho, sababtoo ah dabcan waxaan jeclaan lahaa inaan ciyaaro wax badan, laakiin Runtii waan ku raaxaystaa ka mid noqoshada koox fiican, si fudud ayaa la ii soo dhoweeyey oo qof walba wuu i caawiyey.
"Waxaan ahay qof dulqaad badan, laakiin dabcan waxaad u aadaysaa halkaas inaad ka ciyaarto sida ugu macquulsan. Waxaan sidoo kale qabaa - daqiiqadihii aan sameeyay, waqtiyadii aan soo galay - waxaan muujiyay inaan wax ku kordhin karo kooxda. "
Xulashada khadka dhexe ee Ole Gunnar Solskjaer waxaa ka mid ah xiddigaha Bruno Fernandes, Paul Pogba, Fred, Nemanja Matic iyo Scott McTominay.
Tababaraha United Solskjaer ayaa doorbiday labada qadka dhexe ee Fred iyo McTominay oo kaliya ka dambeeya Fernandes kulamada Chelsea, Paris Saint-Germain iyo Newcastle United, iyadoo Pogba iyo Van de Beek keydka fadhiyaan kulankii isbuucii hore ay ka badiyeen Everton.
Daqiiqadiisa kooban ee Premier League, Van de Beek wuxuu leeyahay saxitaan baasas ah boqolkiiba 83.33 - wuxuu ka fiican yahay Pogba iyo Fernandes.
Tartanka Champions League ilaa seddex maalmood oo la ciyaaro, Van de Beek wuxuu ku faanaa inuu saxan yahay boqolkiiba 92, wuxuu ka fiican yahay Matic (89.4), Pogba (85.5), Fred (84.1), McTominay (83) iyo Fernandes (73.3).
Van de Beek ayaa intaas ku daray: "Muxuu aniga [Solskjaer] igu dhahayaa? Waa inaan dulqaataa, laakiin sidoo kale waa inaan sii wadaa waxa aan sameynayo.
"Iyo inuu arkay inuu saameyn fiican ku leeyahay markaan garoonka imaado. Waqtigeygu waa hubaal inuu imanayo. Marka ay fursadahaasi yimaadaanna, waa inaan halkaas joogaa."
Madaxweyne Farmaajo oo Villa Soomaaliya kula kulmay Haween (Daawo Sawirada)